Taliyihii qaybta 12aad ninkii dilay oo xukuumada Riyaale amartay in Hargaysa maxkamada lagu saaro | Somaliland.Org
January 31, 2010	Bisha labaad kowdeedu waxay ahayd maalintii loo qoondeeyey in maxkamada Laascaanood la soo taago ninkii loo adeegsaday dilkii taliyihii qaybta 12aad, Cabdi fataax Muuse Yuusuf. Nasiib daro waxay xukuumadu u dirtay Laascaanood wasiiro ka badan toban, kuwaas oo loo xil saaray sidii ay maxkamadaas u joojin lahaayeen, ninkii ka danbeeyey dilkaasna Hargaysa ama Berbera loogu soo qaadilahaa, loona diyaarin lahaa marshaatiyo been abuura si dilkii taliyahaha dusha looga saaro dad aan waxba galabsan. Wasiiradaas oo loo sii dhiibay lacag fara badan oo ay arintaas ku fuliyaan.
Maxaa Laascaanood maxkamada loogu saari waayey denbiilaha?
Sida iska cad dadkuna ka dheregsan yahay, cabdifataax Muuse haddii laascaanood maxkad lagu saaro, waxaa iska cad in lagu helayo denbigaas, waayo waxaa laga hayaa qiraal iyo cadaymo badan oo muujinaya in uu ka danbeeyey dilkaas lana adeegsaday, waxaa kale oo la hayaa qiraal uu ku sheegay haddii maxkamad la geeyo uu maxkamada horteeda ka cadayn doono dadkii kula jiray falka dilkii taliyaha,isagoo weliba haya haddaymo lagu qanci karo oo maqal ah. Dadkaas oo ay ka mid yihiin.
Madaxa sirdoonka Somaliland Maxamed Nuur.
Taliyaha Ciidanka Nuux Ismaaciil Taani.
Maxay sameeyeen Wasiiradaasi markay laacaanood tageen?
Markiiba waxay abuureen qas iyo amaan daro xun oo saamaysay gobolka sool, si ay u gaadhaan ujeedadooda, una yidhaahdaan laascanood amaan maaha suurta galna maaha in maxkamad lagu qaado, waxaa dhacay dhibaatooyinkan markay tageen Gobolka Sool.
Waxaa qarax lala beegsaday badhasaabkii Gobolka sool faarax Askar.
Taliyihii denbibaadhista gobolka Sool waxaa lagu amray in uu is casilo.
Dadkii ka yimi Bay,Bakool iyo koonfurta Soomaaliya waxay u qabteen in ay magaalada kaga baxaan shan maalmood gudahood, qaar badan oo dadkaas kamid ahna xabsigaa loo taxaabay, waxaana lagu eedeeyey in ay iyagu ka danbeeyaan qaraxyada, ujeedaduna waa si loo kiciyo waddaada laascaanood oo had iyo jeer aan ogolay in dhib loo gaysto dadkaas martida ah.
Dad badan oo reer sool ah baa xabsiga la dhigay si loo kiciyo dadka, loona tuso in aanay cadaaladi jirin, dadkana layska xidhxidho.
Waxaa dhamaan la jaray telifoonkii gacanta ee moobaylka iyo internetkii suu u yaraado xidhiidhka dadka, ujeedadooda ay leeyihiin wasiiraduna aan si dhakhsa ah loo ogaan.
Goobo badan oo magaalada kamida waxay dhigeen waxyaalaha qarxa si dadka loogu qanciyo inay jirto amaan daro.
Waxaa bendow lagu soo rogay magaalada si wakhti loogu helo dhigida waxyaalaha qarxa.
Waxaa la diyaariyey ciidan lagu muquuniyo beesha uu ka soo jeedo taliyii la dilay, hadday is hor taagaan in ninkaas la qaado.
Yaa ka danbeeya dilalka iyo qaraxyada laascaanood
Xukuumada riyaale inay kadanbayso dhibaatooyinkan qof kasta oo inyar oo garasho ahi ku jirto waa ogyahay,. Ujeedada laga leeyahayna waa arimahan soo socda.
Dhulbahante iyo habarjeclo si dagaal looga dhex rido
In la abuuro xaalad dagaal si doorashada dib loogu dhigo.
In aan maxkamad lagu saarin Laascaanood,ninkii ka danbeeyey dilkii taliyaha qaybta 12aad.
Waxaa dadka laga dhaadhiciyey madaxda dhulbahante inay laynayaan beesha uu kasoo jeedo taliyihii la dilay.
Gabagabadii waxay dantu iyo badbaadadu ku jirtaa in maxkamada lagu saaro ninkii loo adeegsaday dilkii taliyaha Gobolka Sool, xukuumaduna joojiso dilalka qorshaysan oo ay wado.
Previous PostDiyaarad Khaas Ah Oo Md Axmed Silanyo Kaga Imanayo Maalinta Axadda EthiopiaNext PostAfhayeenka UDUB oo Qiray Inuu Riyaale Yahay Madaxweyne Sharci Darro Ah	Blog